जति Busy भएपनि कृपया केहि मिनेट समय दिएर पढ्नुहोला,यति दु,खदाइ अबस्थामा कसको के लाग्छ र ? – Taja Khawar
जति Busy भएपनि कृपया केहि मिनेट समय दिएर पढ्नुहोला,यति दु,खदाइ अबस्थामा कसको के लाग्छ र ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र ०४, २०७८ समय: १९:३१:१०
भनिन्छ, श्रीमान श्रीमतीको झ’गडा ‘परालको आगो’ हो एकैछिनमा साम्य हुन्छ ।
स’म्भो’ग’ गर्ने इच्छा महिला या पुरुष कुनमा बढि हुन्छ । – Samachar Post Dai…
तर, तीर्थबहादुर विक र भीममाया विक बीच त्यो कुरा लागु भएन । एकआपसमा पैदा भएको शं’कैशं’कामा हुने घरझ’गडाले सोमबार श्रीमान श्रीमतीले नै ज्या’न गु’मा’उनुप¥यो । उनीहरुका कान्छो छोरा सरोज भन्छन्,‘सामान्य कुरामा पनि आमा बुवाको पटक–पटक वि’वा’द भइरहन्थ्यो, यतिसम्म होला भन्ने सोचेका थिएनौं ।’
यो पनि: यो फल(रुद्राक्ष) एक मुखे देखि २७ मुखे सम्म भएको बिश्वास गरिन्छ । यो संस्कृतको रुद्र र अक्ष बाट बनेको हो । शाब्दिक अर्थमा यो भगवान शिवको अश्रु जलबिन्दु मानिन्छ ।
नेपाली शब्दसागर शब्दकोषमा रुद्राक्ष शब्दलाई “लामा-लामा हरिया केशर हाँगामा-फूल सेता हुने स्याउले एक ठूलो जातको रुख र त्यसैको साना ओखर वा तिमिला खाले काँडे फल” भनेर परिभाषित गरिएको छ । रुद्राक्षलाई हाम्रो गाउँघरमा दाना भनेर पनि चिनिन्छ ।
Last Updated on: August 20th, 2021 at 7:31 pm